मुसा दौड | गृहपृष्ठ
As of 2018-05-24 13:39:22
CHCL 839 (2250) (-2)
CHL 148 (250) (2)
GBIME 308 (13136) (0)
GLICL 987 (270) (14)
GUFLPO 100 (23036) (0)
HBL 596 (3289) (-10)
HPPL 323 (160) (-1)
JFL 175 (945) (11)
NBL 341 (30879) (-6)
NIL 604 (325) (0)
NMFBS 2540 (724) (-55)
PIC 1240 (561) (5)
PICL 836 (855) (8)
PRIN 772 (6489) (-2)
SANIMA 349 (10746) (1)
SDESI 1919 (3065) (-20)
SLICL 710 (466) (6)
UMHL 189 (38) (-3)
WOMI 1560 (2861) (-32)
Home लेख | दृष्टिकोण मुसा दौड
लेख | दृष्टिकोण2views
जहाँ भण्डार हुन्छ, त्यहाँ मुसाहरूको भीड हुन्छ र जहाँ नगद प्रवाह तीव्र हुन्छ, त्यहाँ मानवहरूको भीड हुन्छ । संसारमा ९ सय ५५ भन्दा बढी जनसङ्ख्या मुसा दौडमा छन् र नेपालमा ९ सय ८५ भन्दा बढी, किनकि हाम्रो मुलुक उद्यमी कम र आश्रित बढी भएको मुलुक हो । कृषि, वनजङ्गल, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, कला उद्योगमा परिणत हुन सकेको नै छैन, हाम्रो नगद प्रवाह ऋणात्मक छ । त्यसैले लगानी आकर्षण हुन सक्दैन । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा हेर्छ । जलविद्युत् परियोजनामा उनीहरूको सामान, परामर्श शुल्क र प्राविधिकहरूको पारिश्रमिक इत्यादिको हिसाबकिताब जोडेर आफ्नो लगानीको धेरै प्रतिशत परियोजनाले खिचिसकेको हुन्छ । जलविद्युत् परियोजनाबाहेकको अन्य परियोजनामा जोखीमैजोखीम देख्छन् लगानीकर्ताहरू ।
मल, बीउ, औषधि, औजार आयात गरेर कृषि उद्योगमा परिणत हुँदैन । हाम्रो उत्पादनको मूल्य आयातित उत्पादनको भन्दा सस्तो वा गुणस्तरीय हुनु जरुरी छ । हुन त गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकाय नै चाडबाडमा मात्र सक्रिय देखिन्छन्, जनस्वास्थ्यभन्दा पनि स्टण्टका लागि । दशैंतिहार नजिकिँदा खसीबोका आयात गर्नैपर्ने देखिन्छ । कृषकको उत्पादनको ठोस बजार छैन, बिचौलिया नभए बजार छैन । हामी कसैसँग पनि छैन त्यो समय, जसले कृषिक्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास गर्ने समय निकाल्न सकोस् र पुरस्कारको हकदार बनोस् । सन्तानको उमेर १६ वर्ष पुगेपछि बाबुआमाको भरोसा बढ्दै जान्छ उनीहरूमाथि, कुनै न कुनै बहानामा स्वदेश वा विदेशमा कामको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता नै बन्छ । त्यही युवाशक्ति दक्षिण कोरिया पुग्छ, सिक्छ तर नेपाल र दक्षिण कोरियाको पूर्वाधार दाँज्दा हार मान्छ । कहाँ गोरु र मानव शक्ति, कहाँ प्रविधि र मेशिन । हाम्रो खाँचो प्रविधि, मेशिन र जनशक्ति सबै हो । मेशिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ (ऊर्जा) आवश्यक छ र ऊर्जा आयात गर्दा नगद प्रवाह ऋणात्मक हुन्छ ।
सुनिन्छ, पतञ्जलि ब्राण्डका लागि ठूलो साइजमा नेपालको भू–भाग मागिएको थियो । हामीभित्रको खजाना अरूले अनुसन्धान गरिसकेर जग्गा माग गर्दा पनि हामी प्रकृतिको गर्भमा भएको सम्पदाबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । हिमालको बुटी, यार्सागुम्बा, रूद्राक्ष, बुद्धचित्तले नगद भिœयाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण खोजिरहनु पर्दैन । तर, अफशोच, त्यो संयन्त्र जसले उत्पादनको बिन्दुदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खलाको दायित्व बोक्ने कोही छैन । किनकि हामीलाई रेमिट्यान्सको मन्द विषले लट्ठ बनाएको छ । आजको आवश्यकता भनेको हाम्रो मुद्रा बलियो बनाउनु हो । जापान निर्यातको शक्ति र आत्मनिर्भरताले आप्mनो मुद्रा बलियो बनायो, हामीले कहिले सोच्ने ? हरेक राष्ट्रको गर्भमा सम्पन्न बनाउने सम्पदा हुन्छ र बनाइन्छ, जीर्णलाई पुनर्निर्माण, नवीकरण गरी तन्दुरुस्त राखिन्छ । इजरायलको उदाहरण लिऊँ, मरुभूमि र पहाडले भरिएको मुलुक कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्छ, हामी कृषिकर्मी त्यो देशमा निर्यात गर्छौं र हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भनी आजसम्म रटाउँदै छौं ।
मानव शरीर खाना नहुँदा १० देखि २० दिनसम्म बाँच्न सक्छ । तर, पानी नभए ३ दिन पनि मुश्किल छ र त्यो सम्पदामा हामीलाई प्रकृतिले धनी बनाइदिएको छ । पानी र बिजुली दुवै निर्यात हुनुपर्ने मुलुकको जनशक्ति विदेशी भाषा सिक्दै लाइनमा ठेलाठेल गरेर भाग्य खोज्दै छन् । प्राप्तिका लागि त्याग र समर्पण चाहिन्छ । हामी सबैलाई क्षणिक समस्या टार्ने मुसा दौडले मुलुक कसरी बन्ने र बनाउनेबारेमा सोच्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ? एक समय यस्तो थियो, इथियोपिया संसारको गरीब देश भनेर पढिएको थियो र अझै पनि त्यही पढाइँदै छ, माफ गर्नुहोला, अब इथियोपिया गरीब होइन, अफ्रिकाको समुन्नत राष्ट्रको सूचीमा पर्न धेरै कुर्नु नपर्ला । प्रतिव्यक्ति आय नै यूएस डलर ९ सय २७ पुगिसक्यो, जहाँ कि हाम्रो ८ सय ३७ मात्र छ । ६ हजार ४ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाले ६० प्रतिशत काम सिध्याइसकेको छ । यो अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठूलो र संसारको सातौं ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो ।
भारतको छिमेकी, कला संस्कृति पनि उस्तैउस्तै भएकाले हामी कलामा गरीब छैनौं भन्ने तथ्य उदितनारायण झा, मनीषा कोइराला, प्रशान्त तामाङ, तेरिया मगरले बलिउडमा बनाएको छविले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । मनोरञ्जनका लागि सिनेमा मात्र होइन, एनिमल प्लानेट, नेशनल ज्योग्राफिकजस्ता च्यानल निर्माण गर्ने ल्याकत हामीमा छैन । मुसा दौडले स्वाभिमान र दूरदृष्टि गुमाइसकेको अवस्था हो । हाम्रो सिनेजगत् पनि उद्योगमा परिणत हुन सकेन । सार्वजनिक गाडी, ट्याक्सी, बजारको माहौल यस्तो छ कि पूरा नेपाल नै रङ्गमञ्च हो र सारा नेपाली कलाकार हुन् । मिनीबस, माइक्रो, डिलक्स बसभित्र पस्नेबित्तिकै फोन बन्द गरिदिए हुन्छ, लोकदोहोरी, हिन्दी तथा नेपाली सिनेमा र पपगीतले फोनको आवाज सुनिँदैन । तर, मनोरञ्जन जगत्का हस्तीहरूलाई नेपालभित्रकै कमाइले थेग्दैन ।
यो सबैको जड यो हो कि हामी जीवनयापनको मुसा दौडमा छौं, कहिल्यै पनि जिन्दगी बनाउनतिर हाम्रो ध्यान गएन । जनता, नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विद्यार्थी जो कसैले मुलुकको भन्दा पनि आप्mनो थैली कसरी भर्ने भन्ने सोचलाई तीव्र पारेको देखियो । त्यसैले सबैको कमाइ नै सीमित भयो । भ्रष्टाचार, घूसतन्त्र, लुटतन्त्र, दलालतन्त्र, कमिशनखोर, मिलीभगतले देश नै खोक्रो भएपछि हाम्रो हविगत जुका, जुम्रा, उपियाँ, उडुसभन्दा फरक देखिएन । सबैको जड हो– कुल गार्हस्थ्य आम्दानी कम हुनु । जोकोहीले पनि गूगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ देश कमजोर हुँदा जनताको बिजोग कस्तो हुन्छ भनेर । आफ्नो जीवनको मात्र ख्याल गर्दा मुलुकको हालत कस्तो हुन्छ । एकछिन होइन, एक सेकेण्ड मात्र खेर फाल्दा कत्रो नोक्सान हुन्छ, त्यो गुमाएपछि मात्र थाहा हुन्छ । हाम्रो मुलुकको अथाह सम्पदामा गिद्दे आँखा र कुदृष्टि राख्नेहरूको कमी छैन । कसैलाई चाहिनेभन्दा बढी विश्वास नगरीकनै हाम्रै पौरखले पुनः इतिहास बनाउनु छ, त्याग गर्नु छ, उद्यमी बन्नु र बनाउन मद्दत गर्नु छ । प्यालेस्टाइनको जस्तो हविगत नहोस् ।
लेखक ऊर्जाविद् हुन् ।
अभाव स्रोतको कि सोचको ?
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०५:५०
अमौलिक अर्थतन्त्रका पीडा
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०५:४४
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०८:१८
ऊर्जा विकासमा तनहुँ हाइड्रो
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०८:१४